▷ Princess Aerofryer XL Saliid Fryer bilaash ah ▷ Fikradaha iyo Qiimaha ugu Fiican
Princess Aerofryer XL Saliida Free Fryer
Jikada aad u wanaagsan, maanta waxaan dooneynaa inaan falanqeyno Qalab Bilaash ah Princess Air Fryer XL, sidoo kale loo yaqaan Aero Digital Fryer. Astaanta Nederlaanku wax badan nolosha kuma adkayn si ay magaca ugu dhejiso qalabkeeda cusub, inkasta oo ay taasi tahay tan ugu yar.
Eeg Qiimaha ugu Fiican ee Xilligan
Waxa runtii na xiiseeya waa adiga sifada iyo waxa ay inoogu qaban karto jikada, laakiin marka hore waa inaad taas ogaataa waxaa jira laba nooc oo model ah, 182020 iyo 182021 kuwaas oo aan arki doono kala duwanaanshahooda inta lagu jiro dib u eegista.
Sida dhammaan maqaalladayada, waxaan ku falanqeyn doonaa aasaaska ugu muhiimsan on a Hot Air Fryer ah, sifooyin kale oo ay bixiyaan model this, iyo marka la barbardhigo kuwa ay xafiiltamaan toos ah. Aan samayno
➤ Astaamaha sifada ah Princess Aerofryer XL
➤ Qiimaha Princess Digital Aerofryer XL
Muxuu samayn karaa shiilan saliid la'aan ah?
➤ Princess Fryer Reviews
Waa maxay sababta aad u dooratay amiirad Saliid Fryer-free
➤ Soo iibso amiiradaada Fryer bilaa Saliid
Aan aragno waxa ay Princess bixiso in ay badeecada calanka u ah cunto karinta caafimaad leh Saliid yar oo wajaheysa noocyada waaweyn ee qaybta, sida Philips iyo Tefal.
▷ Awood Wacan
The Princess Digital Hot Air Fryer waxay leedahay a awoodda 3.2 litir. Ma garanayno sababta calaamadaha qaarkood ay noogu soo bandhigaan awoodda litir iyo kuwa kale ee kiiloogaraam, waa wax keena khaladaadka.
Ugu dambeyntii, waxa muhiimka noo ah waa qiyaasta qiyaasta ee qaybo aan hal mar karinsan karno. Iyada oo qaabkan, marka loo eego astaanta lafteeda, Waxaan u karin karnaa 5 qof, marka waa model xiiso leh gaar ahaan qoysaska.
Mid ka mid ah qodobbada ay labada nooc ku kala duwan yihiin waa awoodda, inkasta oo aanay wax badan kala duwanayn. Aerofryer XL 182020 wuxuu leeyahay iska caabin ah 1500W iyo Princess Touch Digital 182021 beddelkeeda 1400W. Labadaba waan awoodnaa nidaamiso heerkulka si aan u jecelnahay inta u dhaxaysa 80 iyo 200 darajo centigrade oo leh heerkulbeeggeeda dhijitaalka ah.
▷ Isku-xidhka Hawada Xawaaraha Sare
Sida haddii ay ahayd foorno yar, Princess Digital XL Fryer waxay isticmaashaa wareegga hawada heerkulka saxda ah ee lagu kariyo cuntada si sax ah caafimaad badan. Qaybtan kuma jiraan wax war ah oo khuseeya Fryers inteeda kale ee noocan ah.
Iyada oo leh qaboojiyaha hawada kulul waanu iska ilaalinaa firirka oo ur yar ayaa soo baxa ka badan karinta moodooyinka caadiga ah. Laakiin marka lagu daro, Princess Aerofryer XL ayaa leh makiinada weelka lagu dhaqo ee aan dhegta lahayn, fududaynta nadiifinteeda.
Labada noocba waxaa ka mid ah a Xakamaynta dhijitaalka ah ee hawl-badan leh oo leh bandhig LCD. Laga soo bilaabo guddigan waxaad ka dooran kartaa mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada hore loo dhigay ama nidaamiyo heerkulka iyo waqtiga shaqada.
Model 182020 ayaa leh 8 Barnaamijyo diyaar ah iyo 182021 ayaa kuu ogolaanaya inaad kala doorato 7 qaababka karinta. Waxay kaloo leeyihiin a ilaalinta kulaylka badan, kaas oo ka saara mishiinka haddii uu ka sarreeyo heerkulka badbaadada.
Labada qalabba waxay leeyihiin muuqaal isku mid ah waana shiilan qoto dheer oo la siiyay khaanad la saari karo oo leh gacan si loo baro cunto. Nooca koowaad xoogaa waa ka culus yahay waana ka culus yahay waana mid ka mid ah dhinacyada lagu hagaajiyay qaabka cusub, marka lagu daro waxtarka tamarta.
Fryerku wuu dul saaran yahay cagaha aan simbiriirixnayn derbiyadeeda dibaddana waxay ka samaysan yihiin baco. Ma garanayno haddii ay ka daboolan yihiin kulaylka, laakiin ugu yaraan Gacan-ku-galka si loo soo saaro dambiilaha cuntadu waa waa qabow marka la taabto.
AeroFryer 182020: Miisaanka 5Kgrs - Cabirka: 38,4 x 34 x 33 cm
AeroFryer 182021: Miisaanka 4.7Kgrs - Cabirka: 31,8 x 31,8 x 38 cm
Fryer-ka Saliida-free ee Princess waxaa ku jira dammaanad 2 sano ah, ugu yar ee lagu dejiyay sharciga Spain.
Qiimaha Princess Saliida Free Fryer waa dhexda u dhexeeya moodooyinka ugu jaban iyo noocyada iibka ugu badan. Qiimaha tafaariiqda ee lagu taliyey ee labada nooc waa inta u dhaxaysa 129 iyo 149 euro, inkastoo ay badanaa leeyihiin qiimo dhimis ku dhow 35 boqolkiiba taas oo ka dhigaysa wax ka hooseeya 100 euro. Waad awoodaa eeg qiimaha la cusbooneysiiyay ee labada nooc adigoo gujinaya badhanka.
Markaad iibsatid Fryer-kaaga Kulul ee Caafimaadka leh waxaad heli doontaa dubitaanka dubitaanka iyo buug-gacmeedka u dhiganta
Agabka la heli karo
Shirkaddu si gaar ah ayay u iibisaa caaryada u oggolaanaya in la sameeyo keega ama rootiga ku jira Fryer-ka Hawada:
Dhexroorka digsiga keega: 16,5cm qiyaastii.
Qalabka loogu talagalay diyaarinta keega yar yar ama macmacaanka
Dahaarka kulaylka u adkaysta iyo kuwa aan dhegta lahayn.
Dhexroorka gudaha: 15,5 cm / Dhererka qiyaastii 7,5 cm qiyaastii.
Agabka Princess 182021 Hot Air Fryer
▷ Noocyada kale ee astaanta
Miyaad jeceshay shiilan cunto laakiin si buuxda ulamay qabsan baaxadda ama baahida qoyskaaga? Inkasta oo qaabkani uu weli yahay kan ugu iibka badan, hadda calaamaddu waxay balaadhisay buug-yaraha:
Halkan waxaa ah muuqaal gaaban oo hal daqiiqo ah waxaad arki kartaa qalabkan yar oo shaqaynaya:
Dhammaan suxuunta aad ka fikiri karto, waad ku mahadsantahay shiilan saliid la'aan ah oo Princess ah. Sababtoo ah haddii maalin kasta aad go'aansato nooca cunto karinta ee jikada, hadda waxaad ku samayn kartaa sidaas oo kale mashiin sidan oo kale ah. Miyaadan rumaysan?
Marka aan ka fikirno shiilan qoto dheer, suxuunta shiilan ayaa had iyo jeer maskaxda ku soo dhaca, kuwaas oo inta badan ah jilayaasha daqiiqado badan. Laakiin waa run in cuntada sidan loo kariyey oo keliya Waxaa lagu talinayaa in lagu shiilo saliid la'aan, sababtoo ah tani waxay si weyn u dhimi doontaa baruurtooda. Kaas oo ka dhigi doona suxuunta noocaan ah mid aad u caafimaad badan jirkeena. Ma aha in niyadda loogu talagalay saxan wanaagsan oo shiilan qoyska oo dhan? Waxay noqon doonaan kuwo qallafsan sida aad had iyo jeer u rabto, laakiin aan lahayn baruur.
Hilibku waa mid ka mid ah jilayaasha waaweyn ee tusaale ahaan loogu isticmaalo shiilaynta hawada Princess. Laakiin waa run in sidoo kale cuntooyinka sida croquettes iyo rootiga kale, ay sidoo kale noqon doonaan kuwo qumman. Sababtoo ah ikhtiyaarka ah in la yareeyo kalooriyeyaasha iyo dubay, Waxaan heli doonaa dhammayn adag oo dibadda ah, laakiin gudaha, had iyo jeer hindise oo dhadhan fiican leh. Markaa cuntadu waxay noqon doontaa mid ka casiir badan intaad malayn karto.
Haa, shiileeyaha noocan oo kale ah wuxuu leeyahay ikhtiyaarka foornada. Tani waxay mahad iska leedahay wareegga hawada kulul, kaas oo si degdeg ah u daboolaya cuntada oo dubanaya. Sababtoo ah, Kaliya kama hadli karno wax ku saabsan karinta koorsada koowaad ama labaad, laakiin sidoo kale waxaan dooran karnaa macmacaanka. Rumayso ama ha rumaysan, waxaad samayn kartaa duubo hindi ah iyo dabcan, cheesecakes ama brownies haddii aad doorbidayso. Sow fikrad fiican maaha?
Hilibka iyo khudaarta ama xitaa kalluunka waa la dubay. Bal qiyaas in aad guriga ku haysato barbecue kuu gaar ah! Hagaag, qaboojiyaha hawada ayaad ku shidi kartaa. Waxa kale oo aad ku raaxaysan doonaa in dhammayn qallafsan iyo toasted laakiin si degdeg ah iyo iyada oo aan baahida beer la dhigo ayaa sheegay in barbecue. Cunto-karinta tartiib-tartiib ah waxay ka dhigi doontaa mid kasta oo ka mid ah cuntooyinka ku dhalaali doona afkaaga iyo sidoo kale, hab had iyo jeer caafimaad leh.
Karinta cuntada waxaa lagu mahadin doonaa hawadaas bixisa dhamaystirka uumiga, markaa haddii aad jeceshahay baradhada la kariyey, ka dibna buuxi, sidoo kale waa qorshe wanaagsan oo lagu sameeyo fryer saliid la'aan ah. Inkasta oo aan taas oo keliya ahayn laakiin sidoo kale waxaad samayn kartaa khudaar iyo digaag la kariyey ama turkiga si aad u samayso saxan qaaddo wanaagsan. Tani waa inaad kaliya ku doorataa goobaheeda, adoo dooranaya riixitaanka badhanka.
Badiyaa, Fikradaha ku saabsan mashiinka hawada ee Princess-ka ayaa aad u wanaagsan. Amazon waxaad ka helaysaa a dhibcaha 4.2 ka mid ah 5, hubaal qoraal wanaagsan. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa marag-furka iibsadayaasha la hubiyay ee mar horeba si caafimaad leh ugu kariyay.
Mid ka mid ah qodobbada aan had iyo jeer raadino waa in dhammaan agabka aan soo iibsanno ay fududahay in la isticmaalo. Hagaag, Fryer Saliid-la'aanta ah ayaa leh sifadan. Xitaa haddii aadan jeclayn karinta ama aadan horay u yeelanin shiilan qoto dheer, waxaad ku qabsan kartaa ilbiriqsiyo gudahood.
Sababtoo ah waxaad haysataa wax kasta oo farahaaga ku jira qaabka guddi dhijitaal ah, halkaas oo aad ka arki doonto heerkulka karinta iyo sidoo kale saacadeeyaha. Laakin waxa kale oo ay leedahay dambiisha la saari karo oo leh qayb aan dheg lahayn si cuntadu ay ugu sii jirto saxankaada oo aanay ugu dhex jirin shiilan qoto dheer. Iyadoo aan la iloobin in ay leedahay ilaalinta kulaylka badan iyo cagaha ka-hortagga.
Farsamadii ugu dambeysay ee wareegga hawada kulul
Farsamadii ugu dambeysay waxay naga caawineysaa xitaa in ka badan si aan u diyaarino suxuun kaamil ah, haddii ay suurtagal tahay. Tani waa waxa Fryer saliid-free Princess leedahay, kaas oo mar hore la kacaanka mahad a isku dhafka gaarka ah ee hawo kulul oo leh xakameyn wanaagsan oo heerkulka la doortay.
Heshiiska hawada kulul ee xawaaraha sare leh, uma baahnid wax kale si aad u samayso qaybtayada cuntada. Dabcan, waxaad ku dari kartaa qaado oo saliid ah haddii aad rabto, laakiin mar dambe maya. Si fudud iyada, waxaad siin kartaa suxuuntaada taabasho ka sii daran.
Dejinta karinta ee horay loo qorsheeyay
Mararka qaarkood, marka aan diyaarineyno saxan, ma hubinno heerkulka lagu dooranayo nooca shiilan. Haddii, marka lagu daro heerkulka sheegay, sidoo kale aadan garanaynin inta ay cuntadani u baahan tahay, ha welwelin. Sababtoo ah Fryer-ka Saliidda-free-ka-free ayaa kuu sameyn doona adiga. Tani waa sababtoo ah waxa uu leeyahay 8 habayn hore loo sii qorsheeyay, si markaas la riixo badhanka, karinta la doortay ayaa bilaaban doonta.
Marka aan rabno, waxaan qaadi karnaa tillaabooyinkan laakiin gacanta. Taas oo u horseedaysa noocyo kale oo cuntooyin ah, laga yaabee in yar oo faahfaahsan, laakiin had iyo jeer qumman.
Isticmaal kasta ka dib, waa in aan nadiifinta mishiinka hawada. Laakiin haa, runtii waa hab fudud. Si tan loo sameeyo, waa in aan sugno in ay si buuxda u qaboojiso. Kadib, waxaan ka saari karnaa dambiisha ama qaybaha la saari karo oo aan si fiican u nadiifin karno.
Si tan loo sameeyo, waxaan u baahanahay isbuunyo jilicsan iyo saabuun ama saabuun yar oo sidoo kale jilicsan. Gudbinta maro qoyan oo dibadda ah, waxaan ku guuleysan doonaa natiijo weyn, iyada oo aan lagu darin nooc kale oo alaab ah. Way fiicnaan doontaa in mar kale la isticmaalo!
Fikradeena Princess Aerofryer XL Hot Air Fryer waa nooc leh Waxaa jira xiriir qiimo wanaagsan leh maadaama qiimihiisu celcelis ahaan uu ku dhow yahay noocyo kale oo ka jaban oo fudud. Haddii aadan rabin inaad wax badan ku bixiso ama iibso qalabka aasaasiga ah, waa inaad tixgelisaa astaanta Nederland sida mid ka mid ah mashiinada ugu fiican saliid la'aan si aad cuntadaada uga dhigto mid caafimaad leh.
Summada la aqoonsan yahay
Ma arki karno cuntada
▷ Fryers Isbarbardhigga
Jadwalka xiga waan isbarbar dhigey Fryer Saliida Princess oo leh kuwa kale moodooyinka qiimaha la mid ah. Arag haddii qaabkani yahay kan ugu habboon baahiyahaaga ama ay jiraan kuwa kale oo ku habboon gurigaaga.
Ma la qorsheeyay in la bilaabo wakhti go'an? Waxa kaliya oo aad dooran kartaa wakhtiga ay karinayso in aad damiso, ma dooran kartid in aad shido wakhti cayiman.
¿Ma leedahay xadhig la'aan? Midkoodna moodooyinka ma laha
Miyuu ku jiraa buug cunto karinta? Kuma jiraan buug-cunto karinta
Maxaa suxuunta lagu samayn karaa? Waxaad dubi kartaa, duban kartaa oo shiili kartaa hilibka, kalluunka, khudaarta, macmacaanka, iwm.
Ma tahay inaad kiciso cuntada? Si loo helo natiijooyin wanaagsan waa inaad joojisaa oo aad ku walaaqdaa cuntada badhtamaha barnaamijka.
Waa buuq badan? Waxay sii daysay sawaxanka marawaxada hawada, laakiin dhib ma leh.
Waxaan horay u aragnay dhammaan faahfaahinta qalabkan yar yar, hadda waxaad go'aansatey haddii ay tahay qalabkii aad raadineysay ama uusan buuxin baahidaada. Haddii aad rabto inaad hesho, waxaad ka iibsan kartaa halkan:
Halkan ka iibso Fryer-kaaga kulul
U diyaari suxuunta aad jeceshahay ee leh kalooriyo yar laakiin dhawrista dhadhan isku mid ah; Haddii aadan aqoon heerkulka ugu fiican iyo wakhtiga karinta, waxaad bilaabi kartaa mid ka mid ah 7 barnaamij oo riixaya badhan; jajabka, hilibka, kalluunka, prawns, iwm;
Tiknoolajiyada isku-wareejinta hawada xawaaraha sare waxay u oggolaanaysaa cuntada in lagu diyaariyo hawo kulul oo keliya; Natiijadu waa suxuunta lagu kariyey wax ka yar ama xitaa saliid la'aan.
Fudud in la isticmaalo, xakamaynta heerkulka la hagaajin karo, saacad ku dhex-dhisan iyo guddi kontorool dhijitaalka ah oo taabashada; Si caafimaad leh ugu kari ilaa 80% saliid ka yar
Mugga weyn ee dambiisha (3,2 L) ee 20 cm ayaa kuu ogolaanaya inaad diyaariso 5 qaybood oo shiilan Faransiis ah (800 gr) isku mar; Fursadaha karinta aan dhamaadka lahayn marka laga reebo shiilan
Qaybaheeda fudud in lagu nadiifiyo saabuun khafiif ah; dambiisha la saari karo, badbaado leh in la isticmaalo oo leh gacan qabow-taabasho; BPA iyo PFOA bilaash ah
(Codadka: 29 Celcelis: 4.1)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Princess Air Fryer XL
13 comments on "Princess Aerofryer XL Saliid Fryer bilaash ah"
02 / 12 / 2019 at 12: 29
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii shaashaddu ay ku dhammaanayso daminta. Waxaan xaqiijiyay in iftiinka iftiinka uu hoos u dhaco, laakiin wali waa shidan yahay. Ma laga yaabaa in shaashadu gebi ahaanba dansan tahay?
jawaabtaada ayaan sugayaa .
23 / 12 / 2019 at 14: 37
Hello. Waxaan u maleynayaa in aan xasuusto in ay gebi ahaanba dami doonto laakiin ma hubo. Aan aragno haddii isticmaale kasta uu ku caawiyo. Salaamu calaykum
01 / 12 / 2020 at 19: 03
Waxaan akhriyay in qaar ka mid ah isticmaalayaasha ay ka cawdaan in Teflon ay ka soo baxdo cuntaduna ay ku dhegto. Wax ma ka taqaan?
16 / 03 / 2021 at 09: 58
Tani waxay dhici kartaa haddii maacuunta birta lagu isticmaalo dusha Teflon. Fikradda waa in la isticmaalo oo ka samaysan alwaax si looga hortago in taasi dhacdo.
Dhawr sano ka dib wax dhibaato ah namaanu kala kulmin Teflon.
17 / 01 / 2021 at 09: 45
Hello. Ama ma aqaano sida loo raadiyo cunto karinta ama ma jiraan kuwo aad u badan. Tusaale ahaan, ukunta shiilan waa la samayn karaa.
Fryerkayga qoto dheer waa amiirad xxl. Si kastaba ha ahaatee, ma lihi wax dhaqan ah mana garanayo sida loo isticmaalo si sax ah. Salaan iyo Mahad celin.
16 / 03 / 2021 at 09: 57
Shiilanyada aan saliidda lahayn waxay la mid yihiin foornada, markaa waxaad heli kartaa tixraac ahaan si aad u ogaato haddii aad cunto ku karsan karto iyo in kale. Xaaladda ukun la shiilay, adiga maaha. Ku roon digsiga shiilan ee saliid saytuun ah.
01 / 10 / 2021 at 16: 17
Haa, waa la samayn karaa, waxaan arkay cuntooyin leh ukun shiilan, laakiin ma bixin dareen badan, ka raadi Google oo hubaal waad heli doontaa.
Ukunta la kariyey aad bay u fiican yihiin
30 / 03 / 2021 at 13: 45
Hello, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado cunto karinta lagu sameeyo waxyaabaha shiilan, mahadsanid
22 / 04 / 2021 at 12: 18
Isla boggan waxaad ku xidhidhisay cuntooyinka sumadda Princess ee shiilankaaga bilaa saliidda ah. Mar kale ayaan kuu daayay
01 / 10 / 2021 at 16: 18
14 / 02 / 2022 at 15: 52
Galab wanaagsan, magacaygu waa Pilar, waxaan dhawaan iibsaday amiiradda xxl aerofryer fryer, hadda waan faraxsanahay, laakiin aniga waxay ii leedahay hoos-u-dhac muhiim ah oo ah inuusan haysan buug yar oo cunto karin ah, buuga tilmaamuhuna si fiican uma sharaxin. sida loo isticmaalo barnaamijyada iyo bogga https://www.cookwithprincess.com/es/recipes/ MAYA FUNCIONA.
Waxa kaliya oo aan waydiinayaa haddii uu jiro qof yaqaan bog kasta oo ku saabsan fryer-kan si uu awood ugu yeesho inuu wax badan ka helo, fadlan ii soo bixi, mahadsanid.
19 / 02 / 2022 at 17: 50
Ma jiro cuntooyin muuqda, kaliya dabool. 😔
22 / 03 / 2022 at 21: 35
Waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo dirto PDF ee cuntooyinka cuntada lagu shiilo 182020